Ireo Korontana Ara-politika Tao Haiti: Efa Fahita Sa Fotoana Tsara Amin’ny Fanovàna Tsy Azo Atao Ambanin-javatra? · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraJoseph W. Alliance
Voadika ny 18 Marsa 2019 5:43 GMT
Pikantsary tamin'ny ampahany tamin'ireo fihetsiketsehana ny volana febroary 2019 tao Haïti, avy amin'ny lahatsary YouTube navoakan'ny PBS NewsHour.
Efa ho herinandro mahery izay ireo arabe ao Port-au Prince sy ireo tanàn-dehibe ao Haïti hafa no hipoka olona manohitra an-kerisetra ny governemanta amperinasa, ary mitaky ny fialàn'ny Filoham-pirenena Jovenel Moise
Tamin'ny 7 febroary 2019 no nipoaka ny korontana, izay nanamarika ny faha-33 taona hatramin'ny nahatapahan'ny didy jadona naharitra efa ho roapolo taona mahery, mba hidirana ao anatin'ny vanimpotoana vaovaon'ny demokrasia, filaminana sy fandrosoana. Saingy io tetezamita io tsy nitondra – farafahakeliny hatramin'izao – ny ambaratongam-pandrosoana na ny filaminam-bahoaka ilaina ary dia teraka ny tabataba.
Io no fahefatra tao anatin'ny sivy volana latsaka izay nandrahonan'ireo fihetsiketsehana goavana handetehana an'i Jovenel Moise sy ny governemantany hatramin'ny nandraisany fitondrana nanomboka ny Febroary 2017, taorian'ny dingan'ny fifidianana lavabe nampisy adihevitra izay naharitra herintaona mahery.
Tamin'ny Jolay 2018, nidina andalam-be ny vahoaka mba hanoherana ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny vokany teo amin'ireo foto-tsakafo andavanandro. Marobe ireo orinasa no voatafika, voaroba na nodorana nandritra ireny fihetsiketsehana ireny. Nohamafisin'ny kolikoly raikitampisaka manodidina ny fifamatoran'i Haïti amin'ny PetroCaribe ihany koa ny hatezeram-bahoaka. Tanjon'ny fandaharanasa ara-angovo ao an'ny faritra, tarihan'i Venezoela, ny hanome solika sy vokatra ara-tsolika manaraka ny fomba fandoavam-bola mitanila, saingy raha tokony hahafahan'i Haïti hanararaotra amin'ny hamatsiana ara-bola ny fampandrosoana, vola maherin'ny 3 lavitrisa dolara Amerikana no nahodin‘ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny governemanta tamin'ny alàlanà fifanarahana tsy mazava – ka ny iray niaraka tamina orinasa antsoina hoe Agritrans, izay tsy iza fa ny Filoham-pirenena Moïse no tompony.
Tao anatin'ny ampolotaona maro tsy nisian'ny filaminana ara-politika – governemanta 10 vonjimaika, filoham-pirenena voafidy fito, fanonganam-panjakana ara-miaramila roa sy fanonganam-panjakana iray, ary koa ireo asa marobe nataon'ny iraka teboky ny fisarahana ny vahoaka. Miha-potika fepetra iainana: manodidina ny 60% amin'ireo Haitiana no miaina ambanin'ny fetran'ny fahantrana ary, araka ireo tombatombana nataon'ny Banky Iraisam-pirenena dia 14% ny tahan'ny tsy an'asa ao Haiti.
Nahita fitomboana ara-toekarena kely ihany ny firenena taorian'ilay horohorontany nandravarava tamin'ny Janoary 2010, nisy fitomboana 5,5 isan-jato tamin'ny taona 2011 teo amin'ny harinkarena faobe. Saingy nilatsaka ho ambanin'ny 2 isan-jato nanomboka hatramin'ny taona 2015 ny fitomboana. Firenena iray amin'ireo tena ratsy fizaràna indrindra ao amin'ny faritra i Haïti: ny 20% amin'ireo tena mahantra indrindra no mifampizara ny latsaky ny 1% amin'ny fidiram-bolan'ny firenena. Ankoatr'ireo olana mikasika ny lamina ara-drafitra, marary noho ny faharefon'ny rafim-pitondrana kidaladala sy ny kolikoly raikitampisaka i Haïti.
Ireo mponina ao Haïti – indrindra fa ireo tanora – dia mampiasa ireo vovonana media sosialy mba hamoronana ny antsoin'izy ireo hoe #PetroCaribeChallenge mba hanetsehana ny fiarahamonina sivily sy ny olontsotra hanao tsindry amin'ny governemanta, mba hitondrany an'ireo olona voarohirohy amin'ny tantara ratsin'ny PetroCaribe ho eny amin'ny fitsarana.
Tamin'ny fahavaratra lasa, tena voahozongozon'ireo fihetsiketsehana mahery setra sy ny fahavononan'ny #PetroChallengers ny governemanta ka nametra-pialana i Jacques Guy Lafontant, Praiminisitra tamin'izany fotoana. Nandray ny asany ny mpandimby azy, Jean Henry Ceant, tamin'ny Septambra 2018 tao anatin'ny fanantenana ho afaka hanavotra ny krizy, saingy tsy nitsahatra ireo fihetsiketsehana manohitra ny governemanta raha tsy tamin'ny Oktobra sy Novambra.
Nihasarotra ny raharaha nandritra ny volana lasa satri ny Gourde, vola ani Haïti, mitohy mihamihen-danja. Efa manakaiky ny 15 isan-jato ny fiakatry ny vidim-piainana ary niakatra be ny vidin'ireo vokatra ara-tsakafo fototra. Niantso fifanakalozan-kevi-pirenena ny Filoham-pirenena Moïse mba hiatrehana ny krizy nanomboka tamin'ny Desambra, saingy nandà tsy handray anjara avokoa ny ankamaroan'ireo sehatra mpifanohitra ara-politika amin'ny governemanta, nanitrikitrika fa ny fialàny irery ihany no hany vahaolana tokana.
Niha-mafy ireo fihetsiketsehana ka nanangoly an'i Port-au-Prince sy ireo tanàndehibe hafa, niantraika hatrany amin'ireo sekoly, ireo hopitaly ary ireo tsena izay tena voadona mafy dia mafy tokoa. Ireo mpanao fihetsiketsehana izay ny sasany nivadika nanao herisetra, dia tsy nitaky fotsiny ny fialàn'ny filoham-pirenena Moïse, fa koa maniry ny fanovàna hatrany am-potony ny rafitra: “tabula rasa” (akipilizo daholo), araka ny fiantson'izy ireo azy.
Ny 14 febroary, nivoaka tamin'ny fahanginany i Moïse rehefa niteny tamin'ny vahoaka izy, voalohany tamin'izany ny fanamelohana ny herisetra. Tsapan'ny vahoaka fa mbola tsy nohenoina ihany indray izy ireo. Araka ny voalazan'izy ireo, mbola tsy hanahy nanararaotra fotoana indray ny Filoha mba hampisehoany tamin'ity indray mitoraka ity fa ananany ny fahaizana mitarika sy ny toetra ilaina mba hamoahana ny firenena amin'io krizy io.
Ny 16 Febroary, nanao torak'izay ihany koa ny Praiminisitra sady nitodika tamin'ny vahoaka tamin'ny filazàna an'ireo andiana fepetranatao hanamaivanana ny hirifirin'ny mponina sy hamongorana an'ireo fototry ny krizy ara-toekarena sy ara-politika. Noantitranteriny indray fa ilaina ny fifanakalozan-kevitra mba hananganana fifanekena fitantanana izay hahasoa an'ireo vahoaka rehetra ao Haïti.
Ho hita eo raha hahavita hampitony tokoa ny hetsipanoherana ireo fandraisampitenana roa ireo. Mandritra izany, nilaza ireo mpanao hetsipanoherana fa “nakatson” izy ireo ny firenena mandra-pialan'i Jovenel na mandra-pahita marimaritra iraisana, nosahanina ihany anefa ireo asa tsy azo ialàna ho fampandehana-draharaha tamin'ny 16 Febroary, izay nahafahan'ny olona nanangona izay sakafo nilaina sy izay filàna fototra azony novidiana
Lalim-paka ny krizy na izany aza.
Ireo sangany ara-politika sy ireo sehatra matanjaka an'ny oligarsia ao amin'ny firenena izay izay mihevi-tena ho manana ny ampihimba ara-toekarena tsy azo lavina no nahasintona ny fanjakana, tamin'ny alalan'ny famoronana ny rafitra fampanofàna izay mampidi-doza amin'ny fitomboana ara-toekarena maharitra.
Ireo vondrona mpanohitra ara-politika efa nahazatra dia maniry haka fitondrana amin'ny fomba rehetra, saingy tsy mahavita mihitsy manolotra safidy matanjaka sy mifanaraka amin'ny toe-javamisy tsy miova. Mbola eo andalam-pianarana izay fomba hamadihana ny fikatrohana ara-tsosialy miabo mba ho lasa hetsika politika mahomby ny #PetroChallengers. Rehefa dinihina, ny olana lehibe mipetraka taorian'ireo korontana ara-politika misy ankehitriny dia ny hahalalana raha toa io mampiseho fotsiny misimisy kokoa zavatra iray mitovy, na manokatra varavarana mba hamoronana fanovàna iray tena izy sy ara-drafitra ao Haïti.